01 kpọrọ nkụ Cabinet
Camera kpọrọ nkụ Cabinet
SMT kpọrọ nkụ Cabinet
BGA kpọrọ nkụ Cabinet
02 Ihicha oven
Air Blast Ihicha oven
Vaccum Ihicha oven
Elu okpomọkụ oven
Hot-ikuku Sterilizer oven
n'uko n'ịnyịnya dehumidifier
Industrial Iji Dehumidifier
04 Safety ọnọde
05 Home ngwa oru
Ngwá Ọrụ Set
06 ụlọ nyocha Equipment
Ịnọgide iru mmiri & temp Chamber
Drug Kwụsie Test Chamber
Osisi Uto Chamber
Electro- thermal àkwá
Hot Sale Large Automatic 1584 Chicken Egg àkwá
Industrial Iji Industrial Ihicha oven
160L Water Jacketed laabu CO2 àkwá price
4 drum HDPE ikwafu containment pallet
Igwe anaghị agba nchara Laboratory agụụ oven na mgbapụta
High na ala okpomọkụ iru mmiri Environment Test C ...
Agụụ Ihicha Equipment
Jiangsu, China (Chile)
Igwe anaghị agba nchara Laboratory agụụ oven
133Pa Laboratory agụụ oven
± 1 ℃ Laboratory agụụ oven
Arụ ọrụ okpomọkụ:
+5 ~ 40 ℃ Laboratory agụụ oven
2pcs Laboratory agụụ oven
Mgbe-sales Service Ese:
Ọ dịghị esenidụt ọrụ nye
50 Ibe / iberibe kwa Month Laboratory agụụ oven
Laboratory agụụ oven ngwugwu: Plywood ikpe ma ọ bụ ụgbụgbọ mmanụ aṅụ katọn ngwugwu.
Ẹnam ekese ke 7 ụbọchị mgbe ugwo
Main iche iche nke Ihicha oven
Product aha: Laboratory agụụ oven na mgbapụta
Laboratory agụụ oven Ngwa
iko ngwaahịa ụlọ ọrụ anya agụụ afụ;
ọrụ mmepụta ihe na Ngwuputa ụlọ ọrụ, mahadum, nnyocha sayensị dị iche iche laboratories;
ihe echekwara n'okpuru agụụ ma ọ bụ seramiiki, mama, ágbá, plastic ji egwuri egwu, resin crafts, kandụl, ngwa nbipute cartridges.
Laboratory agụụ oven Atụmatụ
Streamline aak imewe sụrụ ụzọ site shei bụ oyi-akpọrepu ígwè efere electrostatic ịgba;
Liner na-mere nke igwe anaghị agba nchara, ọkara okirikiri square imewe bụ ihe adaba ọcha;
Tightness nke Chassis ụzọ kpamkpam aka ike iwu njirimara, n'ozuzu udi nke silicone roba ụzọ akàrà, iji hụ na elu agụụ ulo;
Owuwu nwere akụkụ anọ nke obodo studio, nke mere na kacha irè olu, na ígwè ụzọ, bullet-àmà abụọ iko ụzọ, nke mere na ọzụzụ ihe ekwe ka ndị ọrụ na-edebe studio na a ilekiri.
Laboratory agụụ oven Specifcation
Product Name Laboratory agụụ oven
Laboratory agụụ oven adịghị adị 2 Ibe
Laboratory agụụ oven voltaji 220V 50HZ
agụụ Rate 133Pa
arụ ọrụ okpomọkụ + 5-40 ℃
Temp. Control iche RT + 10 ~ 250 ℃
Temp. mkpebi / temp. mmajijiji 0,1 ℃ / ± 1 ℃
Laboratory agụụ oven elu ihe ígwè , ọkpụrụkpụ dị ka 1.2mm
Laboratory agụụ oven Inside ihe SS, thinckness ka 3mm
Elu Size (mm) 595 * 600 * 1245mm
Laboratory agụụ oven Njirimara
Mere nke elu mma oyi-akpọrepu ígwè efere, okokụre na electrostatic powder spraying, uwe-bụ ike na ike, na ike nchara eguzogide.
The studio maka elu àgwà anaghị agba nchara efere, gburugburu udi, ezigbo, ezigbo, mfe ọcha.
Housing na studio, na-ejuputa ọkasị mma iko ajị thermal mkpuchi ihe onwunwe, nwere ezigbo thermal mkpuchi ọrụ, n'ụzọ dị irè na-ekwe nkwa izi ezi nke kwụsiri ike nke okpomọkụ na kabinet na ojiji nke gburugburu ebe obibi.
The ụzọ bụ maka abụọ oche iko Ọdịdị, ihe na-ewe iwe na oven pụrụ hụrụ n'ụzọ doro anya, na-enwe ezi okpomọkụ mkpuchi mmetụta. Nwere ike n'ụzọ dị irè na-ezere Burns ọrụ.
Studio na akwadebeghị na okpomọkụ na-eguzogide ọgwụ roba akara mgbanaka n'etiti iko ụzọ, iji hụ na iji nweta elu agụụ ruo n'ókè na igbe.
The elu elu nke okpomọkụ arụnyere ke n'ime mgbidi nke ogbako, ma melite Ime Otu nke okpomọkụ na kabinet dị ukwuu dị ka o kwere omume, na ikwado ụlọ ọcha.
The okpomọkụ akara site microcomputer nwere ọgụgụ isi digital technology n'ichepụta, na ulo oru PID onwe ọnọdụ na ọrụ nke anọ abụọ ikanam Windows-egosi, na okpomọkụ akara nkenke, ike mgbochi jamming ike, na-arụ ọrụ dị nnọọ adaba.
Laboratory agụụ oven Nhọrọ Ngwa
RS485 mmiri n'ọdụ ụgbọ mmiri na nkwurịta okwu na
25mm / 50mm / 100mm cable mmiri n'ọdụ ụgbọ mmiri
Independent ịmachi okpomọkụ njikwa
Intellective usoro okpomọkụ njikwa
Intellective mmiri mmiri crystal usoro temperture njikwa
Laboratory agụụ oven na Ngwaahịa
Laboratory agụụ oven Packaging & Mbupu
Laboratory agụụ oven Packaging: Plywood ma ọ bụ mbupụ katọn.
Laboratory agụụ oven nzipu: N'ime 15 arụ ọrụ ụbọchị.
Ebe ọ bụ na anyị na-ike na 2004 afọ anyị na-agbaso echiche nke "ọrụ na àgwà maka iguzobe a ọma ụlọọrụ usoro. "
Ịga nke ọma gị bụ isi iyi. Anyị ụlọ ọrụ esetịpụ iwu nke "àgwà mbụ, ọrụ mbụ". Anyị ji obi ụtọ na-anabata niile onye n'ụlọ na mba ọzọ na-arụkọ ọrụ na anyị.
1. Ị nwere ike hazie ngwaahịa?
Ee, anyị nwere ike hazie ọ bụla na ngwaahịa dị ka ndị ahịa na-achọ. Dị ka voltaji, plọg na shelf.
2. Olee ụgwọ okwu ị na-eme?
PayPal, West Union, T / T, i f ị na-edebe gị na iji on Alibaba, ị nwere ike ịkwụ ụgwọ site kaadị
(100% ugwo n'ọdịnihu.)
3. Olee Mbupu dị?
Site oké osimiri, site na ikuku, awara awara ma ọ bụ dị ka gị chọrọ.
4. Olee nke mba ị na-exported?
Anyị na-e exported ọtụtụ mba, ndị niile kasị niile gburugburu ụwa, dị ka Malaysia, Vietnam, Thailand, United States, France, Spain, Mexico, Dubai, Japan, Korea, Germany, Porland Wdg
5. Olee ogologo bụ nnyefe oge?
N'ime 15 arụ ọrụ ụbọchị.
Previous: Ụlọ nyocha okpomọkụ ma na iru mmiri àkwá microbiology
Next: Hot Sale Large Automatic 1584 Chicken Egg àkwá
ODM OEM Service Function ngwaahia iru mmiri an ...
Sound Gosiri Omenala foldable Plastic earmuffs
Industrial Iji 500 Degree elu okpomọkụ Hot ...
Portable Armrest Metal Big wheel Industrial Deh ...
Iru mmiri Control Photography Equipment kabinet ...
Industrial Hot Air ekesa Laboratory Dryin ...
Okwu: 268, South Wangshan Road, Kunshan, Jiangsu Province, PRChina
Ekwentị: + 86-512-57759270
Ase maka kwuru
N'ihi na jụrụ ase banyere anyị na ngwaahịa, biko kpọtụrụ anyị n'oge ọ bụla na anyị ga-enwe na aka n'ime 24 awa.